७ अर्ब माथिको शेयरकारोबार भएर बन्द भयो नेप्से | Khabar of Nepal
७ अर्ब माथिको शेयरकारोबार भएर बन्द भयो नेप्से
यस साताको अन्तिम कारोबार दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा ७ अर्ब २५ करोड ९ लाख २४ हजार बराबरको कारोबार भएको छ ।
यो दिन २१८ ओटा कम्पनीको ७४ हजार २०८ पटकको व्यापारमा उक्त रकम बराबरको १ करोड ४३ लाख ९० हजार ४४७ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो ।
बुधवारको तुलनामा कारोबार रकम बढी भएको छ । बुधवार रू. ६ अर्ब १६ करोड ६८ लाख ६१ हजार बराबरको १ करोड १२ लाख ८१ हजार ६२५ कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो ।
यसदिन अपर तामाकोशीको सबैभन्दा बढी रकमको शेयर कारोबार भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. २९ करोड ५६ लाख ३५ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य भने यो दिन २ दशमलव १२ प्रतिशत घटेको छ । प्रतिकित्ता रू.१८ ले घटेर कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू. ८८० कायम भएको हो ।
अघिल्लो कारोबार दिन बुधवारको तुलनामा नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ४९ प्रतिशत बढेको छ । यो दिन १२ दशमलव ८८ अंकले बढेर नेप्से परिसूचक २ हजार ६३१ दशमलव ८९ विन्दुमा पुगेको हो । २ हजार ६४५ दशमलव ५० विन्दुदेखि खुलेको बिहीवारको बजार २ हजार ६१६ दशमलव शून्य ३ विन्दुसम्म झरेर उकालो लागेको हो ।
यसदिन कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहगत परिसूचकमध्ये होटल्स तथा पर्यटन समूहको सबैभन्दा बढी २ दशमलव ११ प्रतिशत घटेको छ ।
योसँगै लगानी समूहको १ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत, म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव २५ प्रतिशत र जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत परिसूचक घटेको हो । बिहीवारको बजारमा व्यापारिक समूहको परिसूचक सर्वाधिक ८ दशमलव ६३ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यस्तै बैंकिङ्को शून्य दशमलव ३ प्रतिशत, विकास बैंकको २ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत, जलविद्युतको शून्य दशमलव ९८ प्रतिशत, वित्तको १ दशमलव ९६ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव १८ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव २३ प्रतिशत, अन्यको ३ दशमलव २६ प्रतिशत र लघुवित्तको शून्य दशमलव शून्य ६ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ ।
दोहोरो अंकले बढेको बजारमा साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ भने अन्य सात ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि भएको छ ।
साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ३५ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ३८५ कायम भएको छ । यो दिन युनाइटेड फाइनान्सको ९ दशमलव ९५ प्रतिशत, किसान लघुवित्तको ९ दशमलव ९५ प्रतिशत, वोमी लघुवित्तको ९ दशमलव ९४ प्रतिशत, एनआईसी एशिया लघुवित्तको ९ दशमलव ९४ प्रतिशत, अजोड इन्स्योरेन्सको ९ दशमलव ९१ प्रतिशत, श्री इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्सको ९ दशमलव ७८ प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको ९ दशमलव १६ प्रतिशतले शेयरमूल्य बढेको हो ।
युनाइटेड फाइनान्सको प्रतिकित्ता रू. ३८ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ४२०, किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रतिकित्ता रू. १६८ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ८५७, वोमी लघुवित्तको प्रतिकित्ता रू. १२४ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ३७१, एनआईसी एशिया लघुवित्तको प्रतिकित्ता रू. ७९ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ८७४ कायम भएको छ ।
त्यसैगरी अजोड इन्स्योरेन्सको प्रतिकित्ता ९३ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ३१, श्री इन्भेष्टमेण्ट फाइनान्सको प्रतिकित्ता २२ ले बढेर अन्तिम मूल्य २४७ र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको प्रतिकित्ता १ हजार ११७ ले बढेर अन्तिम मूल्य १३ हजार ३१७ कायम भएको हो ।
यसदिन जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडिसिएल) को शेयरमूल्य सर्वाधिक ५ दशमलव ५३ प्रतिशतले घटेको छ । प्रतिकित्ता २६ ले घटेर कम्पनीको अन्तिम मूल्य ४४४ मा झरेको छ ।